दाँतको सफाई बाहेक यी हुन् मञ्जनको उपयोगी फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
दाँतको सफाइको लागि वा ब्रस गर्नको लागि हामीलाई नभई नहुने चीज हो टुथपेस्ट । यसले दाँतबाट दुर्गन्ध टाढा गरेर त्यसलाई सफा बनाउन मद्दत गर्छ साथै दाँतको पहेंलोपनबाट छुटकारा दिलाउँछ । तर, दाँतको सफाई बाहेक मञ्जनको धेरै उपयोगी फाइदाहरु पनि छन् ।
मुख हाम्रो शरीरको हातजस्तै व्यस्त र फोहरी अंग हो। यसभित्र असंख्य जिवाणु सक्रिय रहन्छन्। हानिकारक जिवाणुले हाम्रो दाँत तथा गिजालाई क्षति पुर्याउँछन्। खाना खानुअघि र पछि हात मुख धुनु जत्ति अनिवार्य छ, खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नु, मुख सफा गर्नु पनि उत्तिनै अनिवार्य छ।
Don't Miss it के हो अटिजम ? बालबालिकामा अटिजम के कारणबाट हुन्छ ? एकपटक पढौ
Up Next सखरका यी अत्यन्त उपयोगी फाईदाहरु